စေ့စပ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူနေ့စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတိုးချဲ့မှုပစ္စည်းကိရိယာများ '' စစ်ဆင်ရေးအချိန်နှင့်လှိမ့ပျဉ်၏အရည်အသွေးအတွက်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်, သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သုံးစွဲမှုအတွက်အောက်ပါအမှုအရာပါ။
1. ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများမှမကြာခဏ Add နှင့် daub lube ။ (ထိုသို့သောမောင်းနှင်မှုကွင်းဆက်ကဲ့သို့)
2. မကြာခဏကြိတ်စက်၏မျက်နှာပြင်မြေမှုန့် Wipe နှင့်အထူးသဖြင့်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သင်ကမသုံးထားဘူးဆိုရင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ, သင် roller မျက်နှာပြင်အတွက်စက်နှင့် lube daub သင့်ပါတယ်သင်နောက်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုတဲ့အခါအဲဒါကိုရှင်းလင်းလိုပါတယ်။
3. ပစ္စည်းကိရိယာများအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးပါဘူးဆိုရင်, သင်ကဖုံးလွှမ်းရန်ပလတ်စတစ်အထည်များသို့မဟုတ်အခြားဆောင်းပါးများသုံးပါနှင့်တကွမိုဃ်းရွာနှင့် damp, အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သေတ္တာကိုရှောင်ရှားဖို့သတိထားမိသင့်တယ်
4. ဖြတ်တောက်ခြင်းတောင်းဆိုမှုမှ lube လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာနေရာတွေကို lube add သင့်တယ်
5. အများအားဖြင့်ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာရုံနှင့်သင်အချိန်အခါ, ရေနံပမာဏရှားပါးမှုအတွက် add သင့်ပါတယ် deceleration စက်၏ရေနံပမာဏသို့ကြည့်ရှု
6.To လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသေတ္တာများနှင့်တိုင်းတွဲဖက်အခြေအနေမျိုးကိုဦးဆောင်, သင်အများအားဖြင့်စစ်ဆေးနှင့်မြေမှုန့်ရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။